निर्वाचन आयोगमा कसले दर्ता ग-यो ‘नेकपा एमाले’ ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News निर्वाचन आयोगमा कसले दर्ता ग-यो ‘नेकपा एमाले’ ?
निर्वाचन आयोगमा कसले दर्ता ग-यो ‘नेकपा एमाले’ ?
काठमाडौं । नेकपाभित्र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामको दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेर दर्ता भएपछि नेकपा एमाले नामको दल हाल आयोगमा दर्ता छैन ।